လာရောက်လည်ပတ်သောစပျစ်ရည် ဒေသများအတွက်ဥရောပ အိပ်မက်မက်သည်တိုင်းပျစ် connoisseur. Stunningly လက်ရာမြောက်သောစပျစ်ဥယျာဉ်, ပူနွေးခြင်းနှင့်နေသာရာသီဥတုက, ဝိဇ္ဇာအတတ်အားတောင်စောင်း, နှင့်ကောင်းမွန်သောအစာအာဟာရသည်ဤထိပ်တန်းစပျစ်ရည်ကိုဒေသများတွင်သတ်မှတ်. နေတယ်ဆိုရင်၊တစ်ဦးစပျစ်ရည်ကိုအချစ်နှင့်မြင်ချင်ကောင်းဆုံး Wineries ပြီး၊အဲဒီမှာရရန်မည်သို့, တစ်ဦးကရထား Save ကိုသင်အဲဒီမှာ get ကူညီပေးပါမည်!
ဥရောပစပျစ်ရည်ကိုချစ်သူများကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးသောအရာကိုသိရန်အပေါ် Read. ငါတို့သည်သင်တို့ပြီးသားဤဆောင်းပါးကိုအဆုံးသတ်ရှေ့၌သင်တို့စိတ်တွင်ထုပ်ပိုးကြလိမ့်မယ်အလောင်းအစား!
အ Rhone တာင္ၾဝိုင်တိုင်းဒေသကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အများကြီးကနေကိုပူဇော်ယဉ်ကျေးမှု အမြင် တူ عینک آفتابی زنانه ليون တဦးဖြစ်ခြင်း၏အနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ. ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောနှင့်အတူ, စစ်မှန် gastronomy, အဆိုပါ Rhone Crozes-Hermitage ၏ကျော်ကြားဝိုင်နဲ့စပျစ်ရည်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ရဲ့ကောငျးကငျဘုံဖြစ်ပါသည်, Cote-Rotie နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစပျစ်ရည်ကိုခရီးသွားဧည့် drawing Chateauneuf-du-Pape.
အနန်း wineries ပူဇော်ပြီးပြည့်စုံသောစပျစ်ရည်ကိုတိုင်းပြည် အတှေ့အကွုံ. Tuscany အချို့တွင်ပါဝင်သည်မသာ အီတလီနိုင်ငံရဲ့ အကျော်ကြားဆုံးဘွဲ့, သစ်ကို Val d'Orcia ကို DOC နဲ့တူ, Vino Nobile di Montepulciano, အဆိုပါဒေသသည်ဒဏ်ခတ်န, ပွညျသူပွညျသားချစ်ခြင်းမေတ္တာ, နှင့်ကြီးမားဝမ်းမြောက်သောစိတ်များဝေမျှခြင်းကအခြားသူများနှင့်အတူ.
အဆိုပါမိသားစုသီးသန့်သူတို့ရဲ့အပေါ် Riesling ထုတ်လုပ် 4.2 အချဉ်ဓာတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာအကြားပြီးပြည့်စုံချိန်ခွင်လျှာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိကြသည့်မြေယာများဟက်တာ. အဆိုပါပြင်းထန်စွာ-ချီးကျူးဝိုင်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဖြန့်ဝေလျက်ရှိ. သင်တို့အပေါ်မှာ-site ကိုစပျစ်ရည်ကိုမြည်းစမ်းဖို့လိုပါလျှင်, ကြိုတင်ရက်ချိန်းစာအုပ်ဆိုင်သေချာပါစေ.
သင်၏မျက်စိသည်၎င်း၏မတ်စောက်သောကျန်ကြွင်းသောအရပ်တို့အပေါ်မှာသတ်မှတ်ထားပထမဦးဆုံးအကြိမ်, သင်ကလူအပေါင်းတို့၏လက်တွေ့အားဖြင့်ဒဏ်ခတ်နေ. (အထူးသဖြင့်စပျစ်ရည်ကိုအနည်းငယ်ပုလင်း post). အသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့် တစ်ကမ္ဘာအမွေအနှစ်များအဖြစ်ယူနက်စကို, ရေကန်ဂျီနီဗာ၏ဤနေရောင်-ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘက်ခြမ်းပန်းပွင့်ပွညျ့စုံလသာဆောင်တစ်ဦးရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် setting ကို evokes, သာဒေသခံ Chasselas တစ်ဖန်နှင့်အတူနောက်ထပ်စုံလင်နိုင်အပြာရောင်ရေကို shimmering. အလားတူပင်, ၎င်းရေကန်-ကြံစည်မှုပျံမှာ အစွန်းရောက် သာတောင်ဆိတ်သငယ်နှင့်အဖွဲ့သည်ရိတ်သင့်ကြောင်း slants.
Lausanne မြို့ဿုံ Lavaux များထဲမှအဆုံးမှာတည်ရှိသည်. သဘာဝအဘို့အကောင်းတစ်ဦးအထက်အဖို့ ရှာဖွေစူးစမ်း ထိုဒေသ. ဆွစ်ဇာလန်အတွင်းမှာပဲ, ဒါကြောင့်စပျစ်ဥယျာဉ်မှကြွလာသောအခါ Lausanne အမှန်တကယ်အများစုပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသည်. (ကွန်မြူနတီထက်မသေးငယ်တစ်ဦးသည်စပျစ်ရည်ကြီးထွားလာဒေသပိုင်ဆိုင် 62 ဘောလုံးလယ်ကွင်း, 400 အထိထုတ်လုပ်’000 နှစ်စဉ်ပုလင်း။)
သင့်ရဲ့အိတ် Back နှင့်သင့်ဖန်အားသွင်း. က&#၈၂၁၇;့ဖို့အချိန်အဖမ်းတစ်ဦးရထားသို့မဟုတ်နှစ်ခုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးအ Wineries ဥရောပတိုက်တွင်. တစ်ဦးကရထား Save သငျသညျအဘယ်သူမျှမက hidden အခကြေးငွေနှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလုပ်ရတဲ့အခမဲ့လက်မှတ်တွေနဲ့အတူပေးသွားမှာပါ. မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? သင်၏စပျစ်ရည်ရရန်အချိန်, အပေါ်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်အကောင်းဆုံး Wineries ပြီး၊အဲဒီမှာရရန်မည်သို့ပေါ်သို့သင့်ဆိုဒ်? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-wineries-europe/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)